Nagu saabsan - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
Gogosha Caadiga ah ee Caadiga ah
Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd. waa Tech sare iyo cusub. Enterprise, oo daboolaya warshad 15,000 sq mitir ah, oo ku taal Langxi park park, isgoyska Anhui, Zhejiang iyo gobolka Jiangsu, oo ku raaxeysanaya marin ku habboon shabakadda gaadiidka waaweyn. Warshadeenu waxay dhexgalaan nashqadeynta, cilmi baarista, suuq geynta iyo adeegsiga alwaax balaastik ah oo wax soo saar leh.
Waxaan leenahay 24 khadadka wax soo saarka oo leh wax soo saar sanadle ah oo dhan 20,000 tan, oo damaanad qaadaya alaabada xasiloon ee waqtiga ku habboon keena. Dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha waxaa lagu soo saaraa nidaamyo adag oo QC ah.
Waxaan haynaa kooxda QC oo in ka badan 3 sano khibrad ku leh berrinka. Wax soo saarka ayaa la kormeerayaa nidaam kasta. Qaar iyaga kamid ah waxaa tijaabiya dhinac saddexaad. Sidoo kale waxaan soo bandhignay ERP xakamaynta tayada caqliga iyo nidaamka wax soo saarka. Dhammaantood waa iska cadahay oo laga xakameynayaa hal talaabo ilaa talaabo kale. Badanaa waxaan nahay shaqaale maxalli ah, waxay halkaan ka shaqeynayeen dhowr sano iyagoo leh khibrad soosaar wanaagsan. Injineerada waaweyn waxay ka shaqeynayeen iskudhafyada in kabadan 10 sano.
Waxaan leenahay kooxda iibka ee suuqyada dal iyo dibadba. Waxaan xoogga saareynaa suuqgeynta, wax soo saarka cusub iyo tikniyoolajiyadda, sii wadno beddelka iyo tijaabinta tikniyoolajiyadda cusub iyo alaabada cusub.Waxaan heysanaa koox adeeg oo dhalinyaro iyo awood leh oo leh jawaab degdeg ah iyo karti isgaarsiineed oo wanaagsan
Macaamiishayadu waxay ka kala yimaadeen Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Afrika, Bariga Dhexe iyo Aasiya. Wax soo saarka Lihua waxaa tijaabiyey SGS oo leh heerka tayada tayada EU WPC ee EN15534-2004, Heerka qiimeynta dabka ee EU oo leh darajada qiimeynta dabka B iyo heerka ASTM ee Mareykanka WPC. Sidoo kale waxaa naloo xaqiijiyay IS09001-2008 Nidaamka Maamulka Tayada, ISO14001: 2004 Nidaamka Maamulka Deegaanka, FSC iyo PEFC. Ku soo dhawow inaad soo booqato warshaddeenna.
Faa'iidooyinka:Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin tayo wanaagsan iyo sumcad si aan u sii deyno xafiisyo fara badan iyo kuwa wax u qaybiya dalkeenna.
Teknolojiyada:Waxaan ku adkeyneynaa tayada wax soo saarka oo aan si adag u xakameynaa geeddi-socodka soo saarista, oo ay ka go'an tahay soo saarista dhammaan noocyada.
Adeeg:Hadday tahay iibin ka hor ama ka dib iibka, waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican si aan kuu ogeysiinno una adeegsanno alaabteenna si ka dhakhso badan.
Ujeedo ujeedo:Shirkaddu waxay isticmaashaa nidaamyo naqshad casri ah iyo adeegsiga sare ee maaraynta nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9001 2000.
Tayo sare leh:Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista qalab wax-qabad sarreeya, xoog farsamo oo xoog leh, awood horumarineed oo xoog leh, adeegyo farsamo oo wanaagsan.
Kooxda farsamada adag:Waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh warshadaha, tobanaan sano oo khibrad xirfadeed ah, heer naqshadeyn heer sare ah, abuurista qalab tayo sare leh oo tayo sare leh.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2021-2025: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.
Bannaanka WPC decking, Qurxinta WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, Gogosha WPC, Dabaqa WPC, alwaax decking isku dhafan,